Halatr'omby :: Dahalo telo maty voatifitra tany Ambovombe • AoRaha
Dahalo am-polony maro mitondra basy no nanafika tao amin’ny distrikan’Ambovombe, afak’omaly. Nihetsika niady tamin’izy ireo ny tafika nampian’ny zandary. Niraradraraka ny tifitra rehefa nifanehitra tao amin’ny alaben’Ampotaka ireo mpanafika sy ny andiana mpitandro filaminana, ny alatsinainy alina, ka nahalavo ny telo tamin’ireo mpangalatr’omby. Nampitain’ny loharanombaovao fa tafaverina tamin’ny tompony avokoa ireo omby enina amby dimampolo sy roanjato lasan’ny dahalo.
« Tanàna telo, tany Ambohimalaza, Ambitiky ary Sari-sambo samy ao amin’ny distrikan’Ambovombe, no lasibatry ny asan-dahalo. Zandary avy any amin’ny faritra Anosy no nanampy ireo namany taty amin’ny faritra Androy, niaraka tamin’ny miaramila avy amin’ny Rezimanta miaramila voalohany eny Ivato, izay mamita iraka any an-toerana », hoy ny fanazavana avy amin’ireo mpitandro filaminana.
« Ahiana ho mbola nisy razana hafa tamin’ireo dahalo saingy nentin’ireo namany nitsoaka », araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana hatrany.
Tombanan’ireo mpitandro filaminana izay nandray anjara tamin’ity hetsika nanenjehana dahalo ity fa isan’ny nitarika tamin’izao vokatra izao ny fampiasan’ny zandary an’ireo basy vaovao. Nisy koa ny fitaovam-piadiana mavesatra tany amin’ireo miaramila, araka ny fantatra.
Firaisana tsikombakomba :: Mpivady voarohirohy niaraka tamin’ny jiolahy
Famongorana ny fanendahana :: Telo amby roapolo lahy nosamborina teny Antaninarenina